Lozam-pifamoivoizana :: Zaza, sivy volana, maty tamin'ny fivadihana fiara • AoRaha
Lozam-pifamoivoizana Zaza, sivy volana, maty tamin’ny fivadihana fiara
Namoizana ain’olona ny lozam-pifamoivoizana niseho teny amin’ny lalam-pirenena fahaefatra tany Andranovelona, tamin’ny alin’ny alarobia. Nindaosin’ny fahafatesana ny zazavavikely iray, vao sivy volana monja. Nivadika ny fiara nisy azy. Olona enina ambin’ny folo kosa no naratra.
Nianga teto an-drenivohitra hitondra olona hihazo an’i Mahajanga ny taksiborosy iray marika «Mercedes 508 ». Tra-doza ny fiara nony tonga tany Andranovelona, tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany alina. Voalaza fa nisongona kamiao iray teo alohany ity fiara fitaterana. Nandeha mafy izy tamin’izany kanjo nivadika teo an-tsisin-dalana, araka ny fanampim-panazavana voaray avy amin’ny mpitandro ny filaminana. Nivadika indray mandeha ny fiara.
«Anisan’ireo naratra ilay zazakely, sivy volana. Noentina tany amin’ny hopitaly Bejofo Mahitsy izy, saingy tsy tana ny ainy », hoy ny zandary any an-toerana. Efa eo anatrehan’ny mpanao famotorana ny fanadihadiana amin’ity tranga ity.
Tranga tany Ambalavao :: Taksiborosy nahatrarana taolam-patin-jazakely